3 रोमाञ्चक खेल अवलोकन र जापानमा सिफारिस गरिएका Activ गतिविधिहरू! सुमो, बेसबल, शीतकालीन खेल ... - Best of Japan
पृष्ठभूमिमा शूटरस्टकमा हिमाल पर्वत फुजीको साथ कावागुचिको ताल वरिपरि साइकल गर्दै
जब तपाईं जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ, जापानी खेल हेर्न वा आफैंमा खेल गर्न पनि चाखलाग्दो छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई तीन रोचक खेल घडी र पाँच खेल अनुभवहरूको परिचय दिनेछु। यदि तपाइँ खेलकुद मनपराउनुहुन्छ, जापान मा यिनीहरूलाई किन प्रयास गर्नुहुन्न?
तपाईं जानु अघि टिकट र यात्रा बुक गर्नुहोस्!
Most जापानमा सबैभन्दा रोमाञ्चक खेल अवलोकन
जापानमा सिफारिस गरिएका Activ गतिविधिहरू
सुरुमा म एउटा कुरा जोड दिन चाहन्छु। अग्रिम तयारीको लागि त्यो आवश्यकता हो। जापान टिकटहरूमा लोकप्रिय खेल प्रतियोगिताहरू चाँडै बेचिन्छ। क्षेत्र मा गतिविधि यात्रा एकै हो। लोकप्रिय टुरहरू चाँडै नै आरक्षणले भरिन्छ। त्यसो भए, सक्दो धेरै, तपाईले आफ्नो देशबाट प्रस्थान गर्नु अघि टिकट र यात्रा आरक्षित गर्नुपर्छ।
यस बुँदाको लागि, मैले निम्न लेखमा वर्णन गरेको छु, त्यसैले यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
जापान भ्रमण गर्ने पर्यटकहरू बीच सबैभन्दा लोकप्रिय प्रतिस्पर्धा ग्रान्ड सुमो रेसलिंग हो।
सुमो एक परम्परागत जापानी खेल हो, जसको मूल शिन्टो समारोहमा छ। जापानमा, देवताओंको लागि मन्दिरमा लामो समयदेखि सुमो रेसलिंग भइरहेको छ। यस पक्षको कारण, आधुनिक समयमा पनि पहलवानहरू परम्परागत हेयरस्टाइल पछ्याउँछन् र लडाई गर्नु अघि विभिन्न परम्परागत कार्यहरू देखाउँछन्।
ग्रान्ड सुमो रेसलिंगमा दुई पहलवानहरू 4.55 मिटर व्यासको गोलाकार औंठीमा लडिरहे। यदि कि त पहलवान रिंगबाट बाहिर आयो, त्यो सुमो रेसलर हरायो। जे होस् या त पहलवानलाई तल धकेल्दै छ वा भुइँमा हातहरू, त्यो पहलवानको हार।
कुस्ती खेलाडीहरु जीत वा हराएर क्रमबद्ध छन्। सब भन्दा बलियो पहलवानहरुलाई "योकोजुना" भनिन्छ।
ग्रान्ड सुमो टूर्नामेन्टको लागि स्थान मौसम अनुसार भिन्न हुन्छ। टोक्योमा, जनवरी, मे र सेप्टेम्बर र्यागोकुको कोकुगिकानमा प्रत्येक दिन १ 15 दिनको लागि आयोजना गरिनेछ। अन्य समयमा, प्रतियोगिता ओसाका (मार्च), नागोया (जुलाई), फुकुओका (नोभेम्बर) मा प्रत्येक वर्ष आयोजित हुनेछ।
सुमो रेसलिंग हेर्दा त्यहाँ विभिन्न प्रकारका सीटहरू हुन्छन्। औंठीको नजिकको सिट प्रति व्यक्ति १ 15000००० येनको हुन्छ। यी सिटहरू धेरै लोकप्रिय छन्, त्यसैले यो बुक गर्न धेरै गाह्रो छ। औंठीबाट टाढाको नि: शुल्क सिटहरू २००० येनको वरिपरि खरिद गर्न सकिन्छ।
>> ग्रान्ड सुमो कुश्तीको विवरणहरूको लागि, आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
>> ग्रान्ड सुमो टूर्नामेंट टिकटहरूको लागि, कृपया यो साइटलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
के तपाईंलाई "बेसबल" थाहा छ?
बेसबल जापानको सबैभन्दा लोकप्रिय खेल हो। यो खेल संयुक्त राज्य अमेरिका मा जन्म भएको छ, संयुक्त राज्य अमेरिका को मेजर लीग सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। यद्यपि यदि तपाइँ जापानी बेसबल हेर्नुहुन्छ भने, तपाईले देख्नुहुनेछ कि त्यहाँ एक अद्वितीय र रमाइलो वातावरण छ। जापानको बेसबलमा अनौंठो हेरेका तरिकाहरू छन्। यदि तपाईं बेसबल सत्रमा जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ भने (मार्च को अन्त्यदेखि नोभेम्बरको शुरूसम्म) म जापानी बेसबल हेर्ने सिफारिस गर्न चाहन्छु।
बेसबल मूलतः एक प्रतियोगिता हो जहाँ नौ व्यक्तिको दुई समूहले सानो सेतो बलको साथ प्रतिस्पर्धा गर्दछ। दुई टोलीले वैकल्पिक आक्रमणहरू र बचाव गर्दछन् र प्रतिस्पर्धा गर्छन् उनीहरू कसरी आक्रमणबाट रन बनाए। जब टीम बचाउँछ, एक खेलाडी बल फेंक। आक्रमणकारी पक्षका खेलाडीहरू एक पछि अर्को निश्चित स्थितिमा उभिन्छन् र यस बललाई ब्याट (काठको स्टिक )ले हिर्काउँछन्। बचाव पक्षका खेलाडीहरूले यस बललाई छोड्दा यो कब्जा गर्न आवश्यक छ।
जापान मा बेसबल पेशेवर टीमहरु को 12 टीमहरु छन्। यी टोलीहरू मूल रूपमा दुई लिग (सेन्ट्रल लिग र प्यासिफिक लिग) मा विभाजित छन् र एक बर्ष लड्न। बेसबल खेलहरू लगभग हरेक दिन मार्च को अन्त्य देखि अक्टुबर ढिलो सम्म आयोजित गरिन्छ। अन्तमा, दुबै लिगका विजेता टोलीहरू जापानमा भोलि राम्रो निर्णय लिनेछन्।
सामान्यतया यो एक खेल को लागी २ घण्टा भन्दा बढी लाग्छ। खेल अक्सर राती आयोजित गरिन्छ। हजारौं दर्शकहरू हरेक पटक खेल मैदानमा आउँछन्। तपाइँको समर्थन गर्ने टीमको आधारमा खेल स्थलमा सिटहरू विभाजित हुन्छन्। त्यसोभए, तपाईंले कुन टोलीलाई सर्वप्रथम समर्थन गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। जब खेल सुरु हुन्छ, प्रत्येक टोलीको लागि समर्थन लडाई सुरू हुन्छ। तपाईं वरपरका दर्शकहरूको साथ टीमलाई खुशी पार्नुहुनेछ। यो समर्थन संग, दर्शकहरु एक हुन्छन्। यो लगभग चाडपर्व जस्तै हो। यो "जापानी" उत्सवको जीवन्त आनन्द लिइरहेको बेला हेर्नको लागि जापानी शैली हो। (अवश्य पनि, तपाई जबरजस्ती उत्साहित हुनुहुन्न र तपाईको सिटमा मनपर्ने खाना खान ठीक छ!)
यदि तपाईं टोकियोको शहरको बीचमा बेसबल हेर्नुहुन्छ भने, तपाईं टोकियो डोम वा Jingu स्टेडियममा जानुहुनेछ। टोकियो डोम एक इन्डोर प्रकारको स्टेडियम हो त्यसैले तपाईं वर्षायाममा पनि भिजेको बिना हेर्न सक्नुहुन्छ। यो योमिउरी जाइन्ट्सको होम ग्राउन्ड हो, जुन जापानको सबैभन्दा लोकप्रिय टोली हो, यति धेरै दिग्गज खेलहरू आयोजना हुनेछन्। यस बीच, Jingu स्टेडियम एक आउटडोर स्टेडियम हो। यो याकुल्ट निगलको घर मैदान हो। याकुल्ट चियर निस्काउने तरिका अद्वितीय छ। उत्साही समर्थकहरू नीलो विनाइल छाता समर्थन गर्दछन् यदि यो घमाइलो छ भने।
स्थलमा धेरै खाना बिक्रीमा छ। यो एकदम स्वादिलो ​​छ। बियर र सफ्ट पेय विक्रेता तपाईंको सीटमा आउनेछन्। तिनीहरू साँच्चिकै चलाख र उपयोगी छन्। कृपया उनीहरूसँग सञ्चारको आनन्द लिनुहोस्।
>> जापानी बेसबलका लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
टोडोरोकी एथलेटिक्स स्टेडियम, जापानमा जे लिग फुटबल खेल अघि वातावरण। कानागावा डर्बी खेल कावासाकी फ्रन्टेल बनाम योकोहामा एफ। मारिनोस = शटरस्टक बीच
सकर जापानमा बेसबलको रूपमा लोकप्रिय छ।
जापान मा त्यहाँ एक पेशेवर फुटबल लीग छ "जे लीग"। यो "J1" बाट तीन लिगहरू समावेश गर्दछ जहाँ कडा टोलीहरू "J3" मा प्रतिस्पर्धा गर्छन् जहाँ धेरै युवा खिलाडीहरू छन्। त्यहाँ जम्मा 50० भन्दा बढी पेशेवर फुटबल टोलीहरू छन्। यी टोलीहरू प्रत्येक जापान भरका प्रमुख शहरहरूमा आधारित छ, र प्रत्येक इलाकामा त्यहाँ उत्साही प्रशंसकहरू छन्। फुटबल खेलहरू सप्ताहन्तको वरिपरि आयोजित गरिन्छ।
J लीगको लीग खेल मूल रूपमा फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि हरेक वर्ष डिसेम्बरको शुरूमा आयोजित हुन्छ। तिनीहरूको तालिका वसन्तको पहिलो आधा र गिरावटको दोस्रो आधामा विभाजित छ। मलाई थाहा छ कि यूरोपियन पेशेवर फुटबल लीगहरू वसन्त theतुमा र अन्त्यमा सुरू हुन्छ। यसको विपरित, जापानी जे लिग वसन्तमा शुरू हुन्छ र गिरावटमा अन्त्य हुन्छ। यो किनभने जापानी स्कूलहरू अप्रिलमा शुरू हुने बनाइएको हो। त्यसकारण, हरेक मार्च हाई स्कूल वा विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका युवाहरू सजिलैसँग प्रत्येक टोलीमा सामेल हुन सक्छन्।
जापानमा, "J1" "J2" "J3" को खेल बाहेक त्यहाँ केही ठूला फुटबल प्रतियोगिताहरू छन्। ती मध्ये, सम्राट कप सबै जापान फुटबल च्याम्पियनशिप (जेएफए) जुन जापानी फुटबल टोलीले "J1" "J2" आदि को रूपरेखा भन्दा टाढा टूर्नामेन्टमा लडाई गर्दछ विशेष प्रसिद्ध छ।
यदि तपाईं टोकियो वरपर फुटबल खेलहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सायतामा स्टेडियम (सैतामा शहर, सैतामा प्रान्त), अजिनोमोटो स्टेडियम (चोफू शहर, टोकियो), तोडोरोकी एथलेटिक्स स्टेडियम (कावासाकी शहर, कानागावा प्रान्त), निसान स्टेडियम (योकोहामा शहर, कानगावा प्रान्तमा आदि)।
साइतमा स्टेडियम यी स्टेडियमहरूको सबैभन्दा ठूलो हो। व्यावसायिक फुटबल टीम "उरावा रेड डायमण्ड" जुन यस मैदानलाई होम ग्राउन्डको रूपमा प्रयोग गर्दछ जापानको सर्वश्रेष्ठ टोली हो। म तपाईंलाई साईतमा स्टेडियममा उरावा रेड डायमन्डको म्याच हेर्नका लागि सिफारिश गर्दछु।
>> जापानी पेशेवर फुटबलको बारेमा अधिक जानकारीको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
म पाँच प्रतिनिधि खेलहरूमा टिप्पणी गर्न चाहन्छु जुन तपाईंले जापानमा रमाउन सक्नुहुन्छ। म ती सिफारिश गरिएका स्थानहरू सहित ती खेलहरू परिचय गर्दछु।
स्की रिसोर्ट शिगा कोगेन, चम्किलो लुगा लगाएका स्कीयरहरूको समूह पाइन रूखहरूसहित हिउँ उपत्यकाको ढलानमा खडा छ = शटरस्टक
जापानका केहि भागहरू विश्वव्यापी रूपमा धेरै हिउँको रूपमा परिचित छन्। ती क्षेत्रहरूमा, तपाइँ हिउँदमा स्कीइ and र स्नोबोर्डिंगको मजा लिन सक्नुहुनेछ (लगभग डिसेम्बरदेखि मार्च)।
यदि तपाईं नौसिख हुनुहुन्छ जो कहिल्यै स्की वा स्नोबोर्ड गरिएको छैन, त्यहाँ कुनै समस्या छैन। यदि तपाईं स्की रिसोर्टमा जानुहुन्छ, तपाईं स्की पोशाक र स्की उपकरणहरू भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ। धेरै स्की रिसोर्ट्स को लागी, खुट्टा क्षेत्र शुरुआतीहरूको लागि निर्मित हुन्छ। तपाईं स्किइ and र स्नोबोर्डि practice्ग कोमल ढलानमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। आधा दिन पछि, तपाईं स्लाइड गर्न सक्षम हुनेछ। अवश्य पनि तपाइँ व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन सक्रिय रूपमा आयोजित छ। धेरै केसहरूमा आरक्षण अनावश्यक छ।
यदि तपाईं एक अनुभवी स्कीयर वा स्नोबोर्डर हुनुहुन्छ भने, कृपया जापानको हिउँको गुणस्तरको सबै प्रकारबाट आनन्द लिनुहोस्। जापानको होक्काइडो र नागानो प्रान्तमा स्की रिसोर्टसँग धेरै राम्रो हिउँको गुणस्तर छ। म के सिफारिस गर्दछु विशेष गरी होक्काइडोको निसेको स्की रिसोर्ट र नागानो प्रान्तको हकुबा स्की रिसोर्ट। दुबै हिउँ क्वालिटी र कोर्स अद्भुत छन्।
सामान्यतया, होक्काइडोमा तपाई तुलनात्मक रूपमा कम उचाईको साथ विशाल स्की रिसोर्टमा हिउँका गतिविधिहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ, नागानो प्रान्तमा, तपाईं पहाडी क्षेत्रहरूमा खेल्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं हिउँ पर्ने पहाडहरू can००० मीटर उचाइमा देख्न सक्नुहुन्छ। हो, दुबै अद्भुत छन्!
यदि तपाईंले जापानमा पहिलो पटक हिउँ गतिविधिहरू अनुभव गर्नुभयो भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि होक्काइडोको निसेकोमा। किनभने निसेकोसँग अद्भुत हिउँको गुणस्तरको साथ विशाल स्की रिसोर्ट छ। Niseko आवास सुविधा को पूर्ण छ। तपाईं आवासमा तातो स्प्रि enjoyहरू पनि रमाउन सक्नुहुन्छ।
हरेक वर्ष निसेकोले ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटकहरू जम्मा गर्छन्। त्यसैले निसेकोसँग धेरै अंग्रेजी बोल्ने कर्मचारीहरू छन्। तपाईं जापानी बोल्न सक्नुहुन्न भने पनि, त्यहाँ धेरै समस्या छैन।
निसेकोका लागि, मैले निम्न लेखमा विस्तृत रूपमा परिचय दिएँ। यदि तपाइँ आपत्ति मान्नुहुन्न भने कृपया यस लेखलाई पनि हेर्नुहोस्।
>> आधिकारिक निसेको वेबसाइट यहाँ छ
नागानो प्रान्तका पहाडहरूलाई "जापान आल्प्स" भनिन्छ र राम्रा पहाडहरू जोडिएका छन्। हाकुबा पहाडले घेरिएको छ र हिउँको राम्रो गुणले आशिष् दिएको छ।
हकुबामा तपाईं हिउँ परेको पहाडको शीर्षको नजिक गन्डोला र लिफ्ट द्वारा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईं पहाडको फेदमा डाउनहिल स्कीइ and र स्नोबोर्डि goमा जान सक्नुहुन्छ।
हकुबामा पनि तपाईं तातो स्प्रि enjoyहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। निसेको पनि राम्रो छ, तर हाकुबा फ्याँक्न पनि गाह्रो छ।
>> हकुबाको बारेमा विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
निसेको र हकुबा जस्ता स्की रिसोर्टहरूको लागि, निम्न लेखहरू पनि उपलब्ध छन्।
उष्णकटिबंधीय टापुको स्पष्ट निलो पानीमा स्नोरक्लि,, यायामा टापुहरू, ओकिनावा, जापान = शटरस्टक
जापान समुद्रले घेरिएको टापु हो। त्यसैले तपाईं जापान मा धेरै सुन्दर समुद्रहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको प्राथमिक उद्देश्य समुद्रमा पौडनु हो भने, जापानको समुद्र तटमा रिसोर्ट जीवनको आनन्द लिनुहोस्। म तपाईंलाई ओकिनावाको समुद्री सिफारिस गर्न चाहन्छु। ओकिनावाको समुद्री तटहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाईं टोकियोमा घुम्न जाने ठाउँको छेउछाउ समुद्रमा पौडिन चाहानुहुन्छ भने, म काननावा प्रान्तमा शोनन सागर सिफारिस गर्दछु। आउनुहोस्, शिन्जुकु स्टेशनबाट ओडाक्यू इलेक्ट्रिक रेलमार्फत कातासे एनोशिमा स्टेसनमा जाऔं। यदि तपाईं एक्सप्रेस ट्रेन "रोमान्स कार" मा चल्नुभयो भने, आवश्यक समय लगभग १ घण्टा १० मिनेट हो। कातासे एनोशिमा स्टेशनमा उत्रिए पछि, समुद्र तट तपाईंको अगाडि फैलदैछ। हुनगामा कानागावा प्रान्त जस्तै, तपाईं जुलाईको सुरूदेखि अगस्टको अन्त्यसम्म पौडिन सक्नुहुन्छ।
गोल्फ कोर्सको दृश्य परिदृश्य जहाँ इबाराकी प्रान्त, जापानमा टर्फ सुन्दर र हरियो छ। धनी हरियो टर्फ सुन्दर दृश्य = शटरस्टकको साथ गल्फ कोर्स
जापान मा लगभग २,2,400०० गोल्फ कोर्सहरू छन्। यो राम्रोसँग परिचित छैन तर जापान संसारमा सबैभन्दा धेरै गल्फ कोर्सहरू भएको देशहरूमध्ये एक हो। यसबाहेक, गोल्फ कोर्सहरू विविधतामा समृद्ध छन्, जस्तै पहाडहरू नजिक, समुद्रको नजिक, ठूला शहरहरू नजिक पनि। पाठ्यक्रम मा तपाईं इलेक्ट्रिक कार्ट द्वारा सार्न सक्नुहुन्छ। जापानमा बनेको गोल्फ उपकरणहरू भाडा प्रयोगको साथ लोकप्रिय हुँदैछन्।
यद्यपि जापानी गोल्फ कोर्स विदेशी पर्यटकलाई स्वीकार्न अझ सक्रिय छैन। जब तपाइँ जापानको गोल्फ कोर्सको वेबसाइट देख्नुहुन्छ, तपाईले पहिले पाउनुहुनेछ कि तपाई अंग्रेजीमा बुक गर्न सक्नुहुन्न। जब तपाईं वास्तवमै गल्फ कोर्समा जानुहुन्छ, अलि अलि अ English्ग्रेजी प्रदर्शन भएकोले तपाईं अलमल्लमा पर्नुहुनेछ। जापानी गोल्फ कोर्सहरू वास्तवमै विदेशीहरूले भ्रमण गर्न चाहन्छन्, तर तिनीहरू अझै पनी संक्रमणमा छन्।
त्यस्ता अवस्थाहरूमा, म तपाईंलाई विशेष रूपमा ओकिनावाको गल्फ कोर्सहरूमा सिफारिस गर्न चाहन्छु। ओकिनावामा त्यहाँ धेरै राम्रो पाठ्यक्रमहरू छन्। यसबाहेक, ओकिनावामा अमेरिकी सेनाका मानिसहरू र उनीहरूका परिवारले प्रायजसो गल्फ कोर्सहरू प्रयोग गर्दछन्, जसले गर्दा उनीहरू अंग्रेजीमा प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। विशेष गरी कानुचा खाडी रिसोर्टको गल्फ कोर्सले अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियालीको अनुरूप छ र विदेशी कर्मचारीहरूलाई पनि रोजगार दिन्छ।
होक्काइडोमा त्यहाँ लगभग १ 150० गोल्फ कोर्सहरू छन्। ती मध्ये नयाँ न्यूटोस एयरपोर्ट नजिकको नर्थ कन्ट्री गोल्फ क्लब अंग्रेजीलाई जवाफ दिन उत्सुक छ। यदि तपाईं यस्तो गल्फ कोर्समा जानुहुन्छ भने, तपाईं पक्कै पनि अचम्मका सम्झनाहरू बनाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
हालसालै, जापानको सबैभन्दा ठूलो ट्राभल एजेन्सी, जेटीबीले विदेशी पर्यटकहरूको लागि जापानी गोल्फ कोर्स प्रस्तुत गर्दै नयाँ साइट सुरू गर्‍यो। यदि तपाईं तलको साइटमा जानुभयो भने, तपाईंले अ in्ग्रेजीमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ।
>> JTB द्वारा जापानमा UNFORGETTABLE GOLF
धेरै व्यक्ति इम्पीरियल प्यालेस, टोक्यो = एडोबस्टक वरिपरि टहल्छन्
जापानीज दौडिन्छ जस्तो। त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जो हरेक दिन दौडिरहेका छन्। यदि तपाइँ जापान जानुहुन्छ, तपाई कुनै पनि शहरमा दौडिरहेका मानिसहरूलाई भेट्नुहुनेछ। यदि तपाइँ होटेलमा स्टाफलाई सोध्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई त्यो शहर मा एक लोकप्रिय दौड कोर्स सिकाउन सकिन्छ।
यदि तपाईं टोकियोमा दौड्न चाहनुहुन्छ भने, म निश्चित रूपमा इम्पेरियल प्यालेसको वरिपरि दौडन सिफारिस गर्दछु।
टोकियोको बीचमा इम्पीरियल प्यालेस छ (जापानीमा कोकियो)। यो एक पटक महल थियो। इम्पीरियल प्यालेसको वरिपरि चल्दा एक छेउमा5किलोमिटर हुनेछ। त्यहाँ कहिले काँही माथि र तल हुन्छन्। यहाँ धेरै मानिसहरू दौडिरहेका छन्।
इम्पीरियल दरबारको दौडमा धेरै फाइदाहरू छन्। पहिले, यस कोर्समा कुनै संकेत छैन। दोस्रो, त्यहाँ पुलिसहरू छन् जसले यस शाही कोर्समा र यस वरिपरिको इम्पीरियल प्यालेसलाई सुरक्षा गर्दछन्, त्यसैले यो धेरै सुरक्षित मार्ग हो। तेस्रो, यदि तपाईं यो कोर्स चलाउनुहुन्छ भने, तपाईं ऐतिहासिक परिदृश्य, भवन सडकहरूको परिदृश्य, र एक सुन्दर प्रकृति पनि हेर्न सक्नुहुनेछ जुन शहरको रूपमा सोच्न सक्दैन। चौथो, त्यहाँ भुक्तानी स्नान सुविधाहरू छन् जुन पाठ्यक्रम वरिपरि जोगरहरूलाई सहयोग गर्दछ। उदाहरण को लागी, एडिडास "रनबेस टोकियो" संचालित गर्दछ (Hirakawacho मोरी टावर मा स्थित / ठेगाना: २ Chome-2-16 Hirakawacho, Chiyoda, टोक्यो १०२-1०० 102)) जुन भाडा र जुत्ता भाडामा लिन्छ र साथै यसलाई लाकर र नुहाउने सुविधाहरू पनि छन्। दुर्भाग्यवस त्यहाँ कुनै आधिकारिक अंग्रेजी साइट छैन, तर यदि तपाईं तल साइट हेर्नुभयो भने, तपाईं अंग्रेजीको नक्शा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं इम्पीरियल प्यालेसको वरपरको होटेलमा बस्नुहुन्छ भने, यो कोर्स चलाउन तपाईंलाई सहज लाग्नेछ।
>> RUNBASE टोक्यो एडिडास
शिमानमी कैदो एक्सप्रेसवे र साइकलिंग मार्ग ओनोमिची हिरोचिमा प्रान्तलाई इमामबारी एहिमेम प्रान्त संग जोड्छ जुन सेतो समुद्री टापुलाई जोड्छ = शटरस्टक
जापानमा साइकल भाडामा पनि विभिन्न सेवाहरू छन्। तपाईं साइकल भाँडामा लिन सक्नुहुनेछ धेरै शहर र दर्शनीय स्थलहरूमा। यद्यपि जापानमा त्यहाँ धेरै साइकल विशेष सडकहरू छैनन्। तपाईंसँग ड्राइभिंग वा फुटपाथको बीच छनौट गर्न बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। रोडवे खतरनाक छ र फुटपाथ यति चाँडो चल्न सक्दैन किनकि त्यहाँ पैदल यात्रीहरू छन्। क्योटोमा भाँडा चक्र प्रयोग गर्ने मानिसहरू छन्, तर म यो सिफारिस गर्न सक्दिन। कृपया सावधान रहनुहोस् यातायात दुर्घटनामा नपर्न।
यद्यपि साइकलिंगले प्राय: जापानमा जोखिम निम्त्याउँछ, त्यहाँ ग्रामीण इलाका स्थलहरूमा पनि उत्कृष्ट साइकलिंग कोर्सहरू छन्। सब भन्दा लोकप्रिय साइकलिंग कोर्स पश्चिमी जापानमा "Shimanami Kaido (Shimanami समुद्री मार्ग)" हो। यो पाठ्यक्रमलाई "साइकल चालकको पवित्र भूमि" भनिन्छ र धेरै साइकल चालकहरू विश्व भर बाट आउँदछन्।
यो एक कोर्स हो जुन होन्शुको ओनोमिची सिटी (हिरोशिमा प्रान्त) र शिकोको इमामबारी सिटी (एहीम प्रिफेक्चर) लाई 75 60 किलोमिटर (करीव XNUMX० किलोमिटर सीधा रेखा दूरीमा) जोड्छ।
यस कोर्सका लाभहरू तल दिइएका छन्। पहिले, Shimanami Kaido एक अनौंठो पाठ्यक्रम हो जसले तपाईंलाई होन्शु र शिकोकू बीच समुद्रमा साइकल यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ छ वटा साना टापुहरू बीचमा ठुलो सस्पेंशन ब्रिजहरू झुण्डिएका छन्, तपाईं पुलहरूमाथि दौडिन सक्नुहुन्छ। यसका अलावा रोडवेज बाहेक, व्यक्ति र साइकलहरू विश्वासका साथ दौडन सक्ने तरीका कायम राखिन्छ।
दोस्रो, शिमानमी कैदोसँग १ re भाडा चक्र टर्मिनलहरू छन्, तपाईले कुनै टर्मिनलमा साइकल फिर्ता लिन र फर्काउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले टर्मिनलमा फर्किनुपर्दैन जहाँ तपाईं साइकल पहिले किन्नुभयो, तपाईं साइकललाई अर्को टर्मिनलमा फिर्ता गर्न सक्नुहुनेछ (यद्यपि यसको लागत १००० येन अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ)। तपाई साइकलमा सवारी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको मनपर्ने खण्ड शिमनामी कैदोका लागि। यदि तपाईं थकित महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईं साइकललाई केहि टर्मिनलमा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र बस वा फेरीमा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ एक शुरुआती हुनुहुन्छ भने, तपाइँ यस कोर्समा एक घण्टामा दौड्न सक्नुहुने दूरी १० किलोमिटर हो। ब्रेक समय र मार्गमा दर्शनीय स्थल सहित, यसले एकतर्फी हिंड्न करीव १० घण्टा लिन सक्दछ। शारीरिक शक्ति भएको व्यक्तिले around--10 घण्टा लिन सक्दछ। यस कोर्समा त्यहाँ धेरै उतार चढावहरू छन्, कृपया एक अव्यावसायिक तालिका नगर्न निश्चित गर्नुहोस्।
>> Shimanami Kaido को विवरणको लागि, कृपया यो साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्
म तपाईंलाई अन्त मा पढ्न कदर गर्छु